ကျေးဇူး ရှင် ဒရိုက် ဘာလေး – Hlataw.com
ဒေါ် တင့်တင့်တယောက် ခင်ပွန်းသည်တာဝန်ကျရာ တောင်ကြီးကို လိုက်မသွားမိတာ အမှားကြီးမှားသွားပလား စိတ်နဲ့ တညလုံးအိပ်မပျော်ခဲ့ဘူး။ အိမ်ထောင်သက် ၁၀နှစ်သက်တမ်းမှာ တခါမှအလိုးမပျက်ခဲ့တဲ့ အရာရှိဦးမောင်မောင်ဟာ မနေ့ကပဲ တောင်ကြီးကို ယာယီပြောင်းရွှေ့သွားရတယ်။ တကယ်တော့ ဦးမောင်မောင်ဟာ ဒေါ်တင့်တင့်ထက် ၁၀နှစ်အသက်ကြီးတယ်။
ဒေါ်တင့်တင့်ဆိုပေမယ့် အသက်က ၃၅နှစ်။ ငယ်ရွယ်နုပျိုသွေးသားတောင့်တတဲ့အရွယ်။ အရာရှိကတော်မို့သာ ဒေါ်တတ်ခေါ်ရတာ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားက ခုချိန်ထိ လန်းတုန်း။ ဒီလိုနဲ့ဒေါ်တင့်တင့်တယောက် မနက်စောစောထ ခြံထဲလမ်းထလျှောက်ရင်း ကားဂိုဒေါင်အဟောင်းလေးရှေ့ဖြတ်လျှောက်ရင်း “ဇော်ဇော်ရယ် မနေ့ညကလဲလေးချီလိုးတာတောင် အားမရသေးဘူးလား”ဆိုတဲ့အသံကြောင့် ဒေါ်တင့်တင့်တယောက် ဂိုဒေါင်းနားလေးကပ်နားစွင့်နေမိတယ်။
ဒီဂိုဒေါင်က နယ်ကဦးမောင်မောင်ရဲ့တူ ဇော်ဇော်တို့လင်မယားနေထိုင်တဲ့အိမ်လေးပေါ့။ ဇော်ဇော်အသက်က ၂၅နှစ်ဆိုပေမယ့် သူ့အမျိုးသမီး မထားကကျမထက် ၂နှစ်လောက်တောင်ကြီးသေးတယ်။ အိမ်မှာ ကားမောင်းဖို့ဇော်ဇော်ကိုခေါ်ထားရင်း သူ့အမျိုးသမီး မထားကို အိမ်ကူရအောင်ဆိုပြီး ခင်ပွန်းဦးမောင်မောင်က စီစဉ်ပေးခဲ့တာပါ။ “ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ်”ဆိုတဲ့ အသံတွေကြားမှ ဒေါ်တင့်တင့်လဲသတိဝင်လာပြီး အသံမကြားအောင် ခြေသံဖွဖွနင်းပြီး ဇော်ဇော်တို့လင်မယားရဲ့ အချစ်ဇာတ်ဝင်ခန်းကိုတိတ်တဆိတ်ချောင်းကြည့်နေမိတယ်။ အပေါက်ကြားကမြင်ကွင်းကြောင့် ဒေါ်တင့်တင့်တယောက်”အို”ဆိုတဲ့အသံလေးနဲ့အံ့သြမှင်သက်မိတယ်။ကြည့်လေအသက်၂၅နှစ်လူဗလန်လေးဇော်ဇော်ရဲ့လီးကြီးဟာ ၇လက်မကျော်လုံးပတ်က ကျည်ပွေ့နီးနီးလောက်။
ကုတင်ခြေရင်းမတ်တပ်ရပ်ပြီး မထားရဲ့ပိန်ပိန်သွယ်သွယ်ခါးကျဉ်းလေးကို ကိုင်ပြီးလိုးနေတာ။ မထားခမျာ ခင်ပွန်းသည်လူပိန်လေးဇော်ဇော်ရဲ့ လီးကြီးကိုကြိတ်ခံရင်း အောက်ကနေ တအင်းအင်းညည်းနေရှာတယ်။ လိုးနေရင်းဇော်ဇော်က “မမထား ကျနော်လိုးတာကောင်းလား’ “ကောင်းတာပေါ့ဇော်ဇော်ရယ် ဒီလီးကြီးနဲ့ဆို ငရဲပြည်လည်း မမထားလိုက်ရဲတယ်။ လိုး ဇော်ဇော်။ မမထားကိုအားရအောင်လိုး” စကားလဲဆုံးရော ဇော်ဇော်ရဲဆောင့်ချက်တွေဟာ မြန်ဆန်လာပြီး အောက်ကမထားဟာ “တအင်းအင်း ညည်းညူရင်း သူ့ခါးလေးကို ကော့ကော့ပေးရှာတယ်။
ဇော်ဇော်လဲဆယ်ချက်လောက်ဆောင့်ရင်း ကိုယ်ကိုမထားအပေါ်လှဲချရင်း မထားနှုတ်ခမ်းလေးကို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်နေခဲ့တယ်။ ဒေါ်တင့်တင့်တယောက် အမျိုးသမီးပီပီ မထားအပေါ်အမျိုးအမည်မသိ မနာလိုစိတ်လေးဖြစ်ပေါ်ပြီး လေးတွဲတဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ တိုက်ပေါ်တက်ခဲ့တယ်။ အခန်းထဲရောက်တော့ တံခါးပိတ်ပီး လက်ညှိုးလက်ခလယ်နှစ်ချောင်းပူးပြီး ဇော်ဇော်ရဲ့လီးကြီးကိုမှန်းခါ မိမိအဖုတ်ကို အာသာဖြေခဲ့ရတယ်။
နေ့လည် ၁၁နာရီခွဲလောက်ရောက်တော့ ဒေါ်တင့်တင့်က “ဇော်ဇော်ရေ အန်တီကိုကံ့ကော်ဆေးခန်းလိုက်ပို့ပါအုံး” ဟုတ်အန်တီ ကျနော်ကားထုတ်ခဲ့မယ်။ ဒီလိုနဲ့ကံ့ကော်ဆေးခန်းကအပြန် “ဇော်ဇော်ရေ … ၃၅လမ်းက ကြေးအိုးဆိုင်ကိုမောင်းကွယ်။ ကြေးအိုးစားရအောင်” ကြေးအိုးဆိုင်ရောက်တော့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ရင်း “ဇော်ဇော် အန်တီဘာလို့ဆေးခန်းပြလဲသိလား” ဇော်ဇော်လဲခေါင်းလေးယမ်းပြီး “အန်တီဘာဖြစ်လို့လဲ” ဆိုတော့ ဒေါ်တင့်တင့်က “အန်တီကလေးလိုချင်လို့ ဆေးစစ်တာ ကလေးရနိုင်. မရနိုင်ပေါ့။ ဆေးစစ်ချက်ကတော့ အန်တီက ကလေးရနိုင်တယ်တဲ့။
ဘာမှမဆိုးရိမ်နဲ့ဇော်ဇော် မင်းဦးလေးက အန်တီပြောသမျှပဲ။ အဓိကက မင်းသာ ဘယ်သူ့မှမပြောနဲ့တဲ့။ “ဟုတ်ကဲ့ပါ အန်တီ”ဆိုတော့ ဒေါ်တင့်တင့်မျက်နှာဟာ ဆယ်ကျော်သက်တယောက်လိုပဲ ရွှင်မြူးသွားခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကြေးအိုးစားအပြီးမှာ ဒေါ်တင့်တင့်က “၇၈လမ်းက ဟော်တယ်ကိုမောင်းကွာ”တဲ့။ ဒီလိုနဲ့ ဟော်တယ်အခန်းထဲရောက်တော့ ဒေါ်တင့်တင့်ဟာ လက်တဖက်နဲ့ဇော်ဇောကိုသိုင်းဖက်ရင်း ပါးပြင်အနှံ့အနမ်းမိုးတွေရွာရင်း ဇော်ဇော်နှုတ်ခမ်းကို တယုတယစုပ်နေခဲ့တယ်။
အခြားလက်တဖက်နဲ့ဇော်ဇော်အင်ကျီကြယ်သီတွေဖြုတ်ပေးနေခဲ့တယ်။ ဇော်ဇောလဲ စွင့်ကားတဲ့ဒေါ်တင့်တင့် တင်သားတွေကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ညင်ညင်သာ ခြေမွပေးနေတယ်။ ခဏာအကြာနှစ်ယောက်သား အဝတ်အစားတွေကို အပြန်အလှန်ချွတ်ပေးရင်း ဇော်ဇော်မျက်လုံးပြူးသွားတယ်။ ကြည့်လေ အိမ်ထောင်ရှင်မရဲ့နို့တဲ့ဗျာ။ လုံးဝန်းပြီး ကျစ်ထုပ်နေတယ်။ အရွယ်အစားကလဲ ထန်သီးနုနုအရွယ်အစား. နို့သီးခေါင်းတွေဟာ ပန်းရောသမ်းနေတယ်။
ဇော်ဇော်လဲ အငမ်းမရနို့တွေကိုစို့ရင်း ဘယ်လိုမှစိတ်မထိန်းနိုင်တဲ့အဆုံးမှာ ဒေါ်တင့်တင့်ကို ညင်ညင်သာသာအုတ်နံရံဘက်တွန်းရင်း မုဆိုးဒူးထောက်ထိုင်ချကာ. ဒေါ်တင့်တင့်ခြေထောက်တချောင်းကို မိမိပုခုံးပေါ်ထမ်းတင်ရင်း ဒေါ်တင့်တင့်ရဲ့ အမွှေးရိတ်ထားတဲ့ အဖုတ်လေးကို လျှာလေးနဲ့ကလိပေးလိုက်တယ်။ ဒေါ်တင့်တင့်လဲ မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီး ဇော်ဇော်ခေါင်းကို ညင်ညင်သာပွတ်ပေးနေတယ်။
တချက်တချက်အောက်ကိုငုံ့ကြည့်တော့ မိမိရဲ့စောက်စိလေးကို လျှာလေးနဲ့ကလိ. တခါတခါ လက်ကလေးနဲ့ဖြဲပြီး စောက်ပတ်အတွင်းသားနံရံတွေကို လျက်ပေးနေတဲ့ ဇော်ဇော်ရဲ့လျှာအသွင်းအထုတ်လေးကိုကြည့်ရင်း. မိမိတသက်မှာတခါမှမခံစားဖူးတဲ့ အထိအတွေ့ကြောင့် ဆယ်ကျော်သက်လေးလိုကြည်နူးနေမိတယ်။ တဆက်တည်းမှာပဲ ဇော်ဇော်အပြုအစု အယုအယတွေနဲ့တွေ့ရတာ နောက်ကြလေခြင်းဆိုတဲ့ နှမျောမှုလဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။ ဇော်ဇော်လဲ ၁၅မိနစ်လောက် ဘာဂျာပေးအပြီးမှာ ဒေါ်တင့်တင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ဆတ်ကာဆတ်ကာတွန့်သွားတယ်။
ဒေါ်တင့်တင့် မိမိလျှာနဲ့တခါပီးတာကို ဇော်ဇော်လဲကြည်နူးနေမိတယ်။ ခဏအကြာ ဒေါ်တင့်တင့်ဟာ ဇော်ဇော်လက်မောင်းကို ဆွဲတင်ပြီး “မောင် တော်ပီကွာ မကိုမနှိပ်စက်ပါနဲ့တော့ မ မခံစားနိုင်တော့ဘူး”ဆိုတဲ့ ခပ်ချွဲချွဲအသံလေးနဲ့ ပြောရှာတယ်။ နောက်အိပ်ရာပေါ်ပက်လက်ကလေးလှန်ပေးနေတယ်။ ဇော်ဇော်လဲ အိပ်ရာပေါ်တက်တော့ တသက်မှာတခါမှမအိပ်ဘူးတဲ့ ရေမြှုပ်မွေ့ရာပေါ်မှာ အပျိုတယောက်အလှထက်ပိုတဲ့ မိန်းမကိုလိုးရတော့မယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့ ရင်ခုန်နေတယ်။
ဇော်ဇော်ဟာ ဒေါ်တင့်တင့်ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ညင်ညင်သာဆွဲကားပြီး မိမိလီးကြီးကို စောက်ပတ်အဝမှာတေ့ပြီး ဖြေးဖြေးခြင်းဖိလိုက်တယ်။ ကြည့်ပါအုံးဗျာ အနှစ်၁၀အိမ်ထောင်ရှင်မှသာပြောတာ စောက်ခေါင်းကျဉ်းကျဉ်းလေးဆိုတော့ ဇော်ဇော်လီးကြီးဟာ ဘယ်လိုမှလျောလျောရှုရှုမဝင်ပဲ ကျပ်နေခဲ့တယ်။
ဇော်ဇော်လဲ ဒေါ်တင့်တင့်ပါးလေးနမ်းရင်း မမ နဲနဲနာမယ်နော် မောင်လိုးတော့မယ် ဆိုတော့ “လိုးပါမောင် မောင်ကြိုက်သလောက်လိုး” ဆိုတဲ့စကားမဆုံးခင် ဗျစ်ဆိုတဲ့အသံနဲ့အတူ ဒေါ်တင့်တင့်အောက်နှုတ်ခမ်းတွေကို ပျက်လုမတတ်သွားနဲ့ကိုက်လိုက်မိတယ်။ ဇောဇော်လဲ အဆုံးထိလိုးလိုက်ရင်း သူ့လီးကြီးဟာ ဒေါ်တင့်တင့်သားအိမ်ကို သွားသွားထောက်တယ်။
ဒေါ်တင့်တင့်လဲညည်းတွားရင်း ‘ကောင်းလိုက်တာ မောင်ရယ် မဘဝမှာ ဒီလိုနာနာကျင်ကျင်တခါမှအလိုးမခံခဲ့ရဘူးဘူး။ မောင်နဲ့တွေ့မှ မဆန္ဒတွေပြည့်ဝတော့တယ်” ဇော်ဇော်လဲအချက်ငါးဆယ်လောက် ခပ်ကြမ်းကြမ်းလိုးအပြီးမှာ ဇော်ဇော်သုပ်ရည်တွေဟာ ဒေါ်တင့်တင့်စောက်ခေါင်းထဲပြည့်လျှံသွားတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နားလိုက်လိုးလိုက်လုပ်ရင်း ညနေနေဝင်ချိန်မှာ နှစ်ယောက်သား ပြန်ခဲ့ကြတယ်။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မိမိဇနီး ထားထားကို “မထား ဒီနေ့ကျနော်ဖျားချင်သလိုဖြစ်လို့ စောစောအိပ်တော့မယ်”ပြောပြီး အိပ်ရာဝင်ခဲ့တယ်။ မထားလဲခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဇော်ဇော်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့အမူအရာကိုကြည့်ပြီး အံ့သြနေတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ အိမ်ထောင်သက် ၂နှစ်အတွင်းမှာ အမြဲတမ်းမိမိကို ၂ခါအနဲဆုံးလိုးပြီးမှအိပ်တဲ့ ယောက်ကျားက ဒီနေ့မှထူးထူးဆန်းဆန်းပါလား။ ဒီလိုနဲ့ ညတရေးနိုး လုပ်နိုးလုပ်နိုးနဲ့ဆောင့်ရင်း မနက်၎နာရီသာ ထိုးသွားတာ ကိုယ်တော်ချောက အိပ်တုန်း။ ဒီလိုနဲ့ သူမလဲဘယ်လိုမှအောင့်အီးမနေနိုင်တဲ့အဆုံး ဇော်ဇော်ပုဆိုးကို ချွတ်ခါ ဇော်ဇော်လီးကို ပါးစပ်နဲ့စုပ်ပေးနေတယ်။ ဇော်ဇော်လီးရဲ့ အနံ့တခုကြောင့် မထားမျက်မှောင်ကုပ်စဉ်းစားနေတယ်။
မနေ့မနက်က ဇော်ဇော်ငါ့ကိုလုပ်ပြီး နှစ်ယောက်အတူရေးချိုးတော့ ဇော်ဇော်လီးကို ငါကိုယ်တိုင် ဆပ်ပြာနဲ့ကျကျနန ပွတ်တိုက်ဆေးကြောခဲ့တာပါ။ အခုဘာကြောင့် ဒီအနံ့ကရနေရတာလဲ။ မထားလဲ အတွေးရေယာဉ်ကြောမှာနစ်မျောရင်း “ငါစိပ်ထင်လို့နေမှာပါ’ဆိုပြီး ဖြေဖျောက်ပစ်လိုက်တယ်။ ၁လခွဲအကြာ ဦးမောင်မောင် ပြန်ရောက်လာတော့ ဒေါ်တင့်တင့်ဟာ ဦးမောင်မောင်ကိုပြေးဖက်ပြီး “ကိုကြီးကို ဝမ်းသာစကားပြောရအုံးမယ်။ တင့်လေကိုယ်ဝန်ရနေပြီ”တဲ့။…ပြီးးး